I-3d yemarble eqingqiweyo, ikholam yemarble, ipateni emarmore
uya kuhlala unikwa ixabiso eliyinyani lamatye endalo
Ubuhle belitye lendalo lihlala likhupha ubukhazikhazi balo obungapheliyo kunye nomtsalane
UKUQOKELELWA KWAMATYE ENDALO
Uthini umahluko phakathi kwemarble yendalo kunye nemarble yokwenziwa?
Njengoko sonke sisazi, imarble yimveliso elungileyo, kwaye ke iintsapho ezininzi zisebenzisa i-marble ekuhombiseni kwazo, kwaye i-marble ine-marble yendalo kunye ne-faux marble. Nokuba yimarble okanye ngumntu ...
29 NgeyoMnga, ngo-2020
Ngakumbi nangakumbi abantu bakhetha ukusebenzisa imiphezulu yeetafile zemabhile ngenxa yokubonakala kwayo okuhle kunye neempawu ezintle. Okokuqala, ubulukhuni obuphezulu, akukho lula ukuba deformation.Marble yendalo kukudlula iminyaka emininzi ukwenza ...
15 NgeyoMnga, ngo-2020
Ukusetyenziswa kwemathiriyeli yasemajukujukwini kuhlala kuvelisa okutsha, kwaye izinto zokwakha ezahlukeneyo ziye zangena ngokuthe ngcembe kumbono wethu. Umtsalane wemabhile awuphelanga ukusukela kumaxesha amandulo. Imabhile ...
09 NgeyoMnga, ngo-2020
I-Xiamen Morningstar Stone Co., LTD yasekwa nge-23 ka-Novemba ngo-2017 kwaye yabhaliswa eXiamen, isixeko esihle sesiqithi, ikakhulu sizibandakanya kuzo zonke iintlobo zemabhile yanamhlanje, inyengane, iikholamu ezimile okhethekileyo, njl.
24 Nge-Sep, 2019
Ungaqhagamshelana nathi apha kwaye siza kuba nomntu obuyela kuwe kungekudala!